बंगुर फार्ममा फैलिएको आरटेरिभिरिडी फेमलीको भाइरस नियन्त्रणमा -
बंगुर फार्ममा फैलिएको आरटेरिभिरिडी फेमलीको भाइरस नियन्त्रणमा
बैशाख १०, २०७८ बैशाख १०, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on बंगुर फार्ममा फैलिएको आरटेरिभिरिडी फेमलीको भाइरस नियन्त्रणमा
धरानमा बंगुरहरुमा फैलिएको राइबोन्युक्लिक एसिड (आरएनए) समूहको ‘आर्टरी’ भाइरस नियन्त्रणमा आएको धरान पशु सेवा शाखाले जनाएको छ । धरानका विभिन्न वडामा फैलिएको भाइरस लगभग लगभग नियन्त्रणमा आएको पशु सेवा शाखा प्रमुख महेन्द्र पैकाराले बताए ।
‘रोगहरू एकदम नियन्त्रणमा आइसकेको छ’ उनले भने,‘स्याम्पल हामीले काठमाडौँ पढाएका थियौँ । रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । अब रोग नै छैन भने पनि भयो ।’ कार्यालयले स्याम्पल संकलन गर्ने, मरेको बंगुरको व्यवस्थापन गर्ने, जनचेतना फैलाउने कामहरू गरेको पनि उनले बताए ।
उनले मिडियामा बंगुरमा रोग फैलियो भनेर आए पछि मानिसहरूले मासु नै खान छोडिसकेको बताए । यसले गर्दा व्यावसायिक किसानहरू मर्कामा परेको गुनासो पनि उनले गरे । केही समय अघि धरानको वडा नं. ४,५,६ वडामा यो रोग फैलिएको थियो ।
बंगुरमा श्वासप्रश्वास र प्रजननसम्बन्धी रोग फैलिएपछि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको किसानले बताएका छन् । सुरुमा धरान–५ खैरनीस्थित देवान कृषि फार्ममा पालिएका बंगुरमा भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि अरू फार्ममा भाइरस फैलिएको थियो ।
कस्तो खालको रोग हो ? मासु खान मिल्छ कि मिल्दैन ?
यो रोग नितान्त बंगुरर सुँगुरमा मात्र सर्ने रोग हो । यो मानिसमा सर्दैन । ‘यो रोग बंगुरदेखि बंगुरमा मात्र सर्छ । मान्छेमा नसर्ने भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्दैन’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरीका पशु चिकित्सक डा. रमेश घिमिरे भने,‘लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यावसायिक बंगुरपालन गरेका किसानले भने ठुलो क्षति बेहोर्नु¥यो ।’
‘पहिलादेखिको नै रोग यो कुनै नौलो रोग होइन । तर यो पटक अलि बढी मात्रामा फैलिएको छ । यसमा व्यावसायिक किसानहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनले भने । यो रोगले विशेष गरी गर्भिणी बंगुर, प्रजननका लागि पालिएका वीर, बंगुर र पाठा पाठीहरुमाप्रभाव पार्ने गर्दछ ।
मानिसहरूले रोग फैलियो भन्ने बित्तिकै मासु नै खान छोडे । यसले गर्दा व्यवसायीहरू मर्कामा परे । मानिसमा यो रोग नसर्ने हुनाले बंगुरको मासु खान मिल्छ । मासुलाई राम्रोसँग पकाएर खान उनले सुझाव दिए । मरेको नभई स्वस्थ पशुको मासु राम्रोसँग पकाएर खान सकिन्छ ।
यो रोग सरिरमा रहिरहन्छ र अरू रोगले पनि आक्रमण गर्छ । अहिले मौसम परिवर्तनका कारण यो रोग बढी मात्रामा फैली रहेको छ । यो रोग लागेमा
बंगुरमा प्रजनन क्षमता कमजोर बनाउने, उच्च ज्वरो अनि निमोनिया हुने, बच्चा तुहाउने, बच्चा मर्ने, र स्वसप्रस्वासमा असर गर्छ । यो रोगको भ्याक्सिन अहिले सम्म नेपालमा आएको छैन । त्यसैले व्यवसायी किसानहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
– रोगी बंगुरको सिँगान
– रोगी बंगुरको वीर्य, पिसाब
– तुहिएका सालनालसँग स्वास्थ्य वंगुरको लसपस भएमा यो रोग चाडै फैलिन्छ ।
किसानले ध्यान दिनु पर्ने कुरा
– नयाँ फार्मबाट बंगुर नल्याउने
– ल्याउनु परेमा ३ महिना अलग्गै राख्ने
– जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने
– अर्काको खोरमा जथाभाबी नजाने
– चुनाहरू छर्कने
– बंगुर साटासाट नगर्ने
– संक्रमण भएको ठाउँमा बंगुर बिक्री वितरणमा रोक लगाउने
– बंगुरको खोरको नियमित सरसफाइ गर्ने
– मरेको बंगुरलाई नफाली खाल्डो खनेर राम्रोसँग निर्मलीकृत गर्ने
तरकारीको मुल्य बढाउने नेपालगन्जका व्यापारीलाई कारबाहि
गाजर र पालुंगोको रसमा भुटिएको जीरा र वीरेनून मिसाएर पिउँदा हुन्छ यस्तो फाइदा
लालपुरका महिला किसानलाई कुखुरा वितरण
बैशाख १५, २०७८ बैशाख १५, २०७८ किसान आवाज
बङ्गलादेशबाट ३२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्यो
जेष्ठ २७, २०७८ जेष्ठ २७, २०७८ किसान आवाज
धानको समस्या लिएर प्रशासन पुगे किसान
कार्तिक २, २०७८ कार्तिक २, २०७८ किसान आवाज
जिल्ला दुग्ध व्यवसायी संघ बाँकेद्धारा प्रदेशका अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन
असार १३, २०७९ असार १३, २०७९ किसान आवाज
बाँकेमा सन्चालित स्मार्ट कृषि र करार खेतीको अनुगमन
असार १२, २०७९ असार १२, २०७९ किसान आवाज
कर्णालीबाट अदुवाका चाना युरोप निर्यात
असार १०, २०७९ असार १०, २०७९ किसान आवाज
किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण
सकियो १४ औं राष्ट्रिय भेटेरिनरी सम्मेलन, नौ बुँदे घोषणापत्र जारी
असार ५, २०७९ असार ५, २०७९ किसान आवाज
किसानलाई ज्ञान दिन बर्दियामा कृषक पुस्तकालय तथा ज्ञान कक्ष
असार ४, २०७९ असार ४, २०७९ किसान आवाज
मल नपाएपछि बाँकेका किसान चिन्तामा
असार २, २०७९ असार २, २०७९ किसान आवाज